Iphalamende Kazakhstan: isakhiwo, ukuhleleka kokuqokwa komkhandlu amasekela
Ngo-1991, Kazakhstan, kanye ayengaphansi kweSoviet, usezuze isimo isimo esingokomthetho yeningi. Umthethosisekelo lokuqala, esenziwa ngo-1993 (kamuva ngokuphindaphindiwe ukungezwa futhi uchitshiyelwe), isungule ifomu ebumbeneko kahulumeni eholwa umongameli.
I Republic has a idivayisi eyodwa yawo wonke ezifundeni izindikimba ezilawulayo kanye nomthetho jikelele. Njenganoma yimuphi iyizwe yelinyenti, Kazakhstan has amagatsha amathathu kahulumeni, abaluleke kakhulu kuwo - umthetho, emelelwa iPhalamende, liphethe ekamelweni yasenhla nemithombo yasenzansi.
Isici esiyinhloko umphakathi zomthetho - kungcono kuhle ukuba uqaphele isimiso ukwahlukaniswa kwamandla. ukuphathwa lizwe awukwazi ezandleni efanayo, futhi kufanele ngokulinganayo basakaza phakathi kwezinye izakhiwo. Ukuze ugweme ukusungulwa umbuso kobushiqela amagatsha kahulumeni ekhona - zomthetho, mphathi zokwahlulela - kufanele senze kuphela phakathi komkhawulo amandla ayo, ngesikhathi esifanayo ukuhlinzeka isilawuli mutual.
Iphalamende Kazakhstan has umqondo jikelele kombuso wentando yabantu. Siqukethe emakamelweni amabili, Umkhandlu Wezigele kanye Majilis, futhi uMkhandlu yoMthethosisekelo. Umsebenzi oyinhloko ePhalamende - kuyinto ukwamukelwa kwemithetho. idivayisi okunjalo esiye sathatha indawo igunya unicameral - Supreme Council elibusayo ngo-1937
Ngo-1995, kanye Ukwamukelwa koMthethosisekelo, ekugcineni akha ephalamende entsha. Phakathi khona iningi kule aphansi endlini izihlalo kwakungekaNkulunkulu beqembu Kazakh uMongameli. Nursultan Nazarbayev futhi bakhe "Nur Otan" cishe njalo kude phambili phakathi kwezinye imiphakathi zezombusazwe.
Njengoba Kazakhstan iyizwe ifomu ebumbeneko kahulumeni, izifunda ahlukene namadolobha basekela imisebenzi yabo ngesisekelo umthetho eyodwa yawo wonke. Nokho, umthetho-sisekelo weRiphabliki, ngaphezu ophakeme kwemandla embuso, ukusungula uhlelo zesifunda ezimele (maslikhats), banayo amandla alandelayo:
ingxube ezinye izinkinga uhlamvu wendawo;
ukuhlela izinhlelo zentuthuko ezihlukahlukene ukubaluleka indawo;
ubuyekeze uphinde ukuqapha imibiko lesifunda igunya elikhulu;
ekuqinisekiseni amalungelo ezakhamizi zakule ndawo.
amasekela Maslikhat izophela imithetho, kuphela izithakazelo kuleyo ndawo nabakhileyo kuyo, kanye iqhaza ngokuziphatha referenda wendawo. Eminye imithetho, ezivame ukuba insimu yonke yezwe, uthatha kuphela ngokuqondile iPhalamende laseRiphabhuliki Kazakhstan.
Imisebenzi esemqoka Umkhandlu Wezigele kanye namasekela akhe - umthetho, ngaphezu kwalokho, iPhalamende obonisa yomthetho okukhethekile, ezifana: ngemiyalo yezikhulu uMongameli ukuxoshwa Usihlalo eNkantolo Ephakeme, Attorney General, National Bank kanye nabanye.
Okwamanje, leli lizwe linazo nomhlangano lesithupha iSigele, isikhathi sokuba sesikhundleni kwamalungu ayo - iminyaka 6, futhi ngemva kweminyaka emithathu, ungakwazi ngokwengxenye kube Ukwakheka lomhlangano olusha. Ukuqala ezisemthethweni imisebenzi kubhekwa umhlangano wokuqala, futhi ekugcineni - zokugcina. Kazakhstan IPhalamende kwesikhathi sokuqeda umsebenzi ngendlela njengoba kubekiwe kuMthethosisekelo.
Izihlalo 47 senatorial labelwe 15 umongameli, lonke aqokwa kusukela esifundeni ngasinye noma emzini ukubaluleka republic. Isekela umzimba obuphakeme amandla esiphezulu abakwazi kanyekanye ngibe sendlini aphansi kanye engenhla.
IsiGele ePhalamende Kazakhstan akuwo njengendlela ehlukene (kuphela umzimba ophakeme), kanye kanye Majilis (okokugcina ngokuvamile ngosuku ukuvulwa kanye lokuvala amaseshini).
Amandla kwesiShayamthetho yesibili zihlanganisa izinto okulandelayo:
Ukuqokwa wokhetho lobumengameli ku-republic.
the Majilis wePhalamende weRiphabhulikhi Kazakhstan kuphela has isinyathelo zomthetho, amaphrojekthi ingenziwa inhloko yezwe, amalungu ephalamende kanye uhulumeni.
Kushicilelwe uhlu imithetho nokulawula ubudlelwane ebalulekile yomphakathi, ezinye zazo yilezi:
amalungelo ezakhamuzi inkululeko;
ukulawula isinyathelo kahulumeni;
amasevisi kutenhlalo, kunakekelwa ngetemphilo kanye nokunye okuningi.
Ikamelo elingaphansi yakhiwa 107 kwamaphini, abazoqeqeshwa okhethwe ngamunye amaqembu kanye nokhetho khulula kunqunywa inombolo efakiwe iPhalamende Kazakhstan. abantu abayisishiyagalolunye kule Mazhilis unelungelo ukuba baphakamise umzimba ekhethekile sokweluleka umongameli - Yabantu LoMhlangano WeRiphabhulikhi YaseNingizimu Afrika, obhekene ukuthuthukiswa lwenqubomgomo kazwelonke kuleli zwe.
Endlini encane egatsheni zomthetho siqukethe amakomiti eziyisikhombisa, okubizwa ngokuthi izidumbu ukusebenza, it is lapha kubhekwa zamukela imithetho futhi kwenzeka ngesikhathi ukunqunywa umhlangano jikelele.
kusho umholi weqembu ngo-2007 walwaphula amarekhodi amavoti, ethola amaphesenti 88,4 wezindleko.
Ngo-2011, Nursultan Nazarbayev, ukuphelisa namandla Majilis we umhlangano wesine laqokwa ukhetho, okwaphumela amaphesenti eziyisikhombisa Ukudlula isithiyo unqobe amaqembu amathathu.
Njalo ngonyaka kuba ukuncipha kwemiphakathi zezombusazwe ukuphakamisa ukhetho zabo ngamandla. Okhethweni 2016 ePhalamende Kazakhstan yahanjelwa inombolo okungenani imidlalo, ingqikithi eziyisithupha, futhi ngo-2012 kwakunabamemezeli eziyisikhombisa.
Izimiso zomthetho wetela ekubuyiseleni kwezesayensi yezomnotho
Iphasiphothi Yokusebenzelana Kwamazwe Omhlaba - "ukukhanya green" e zagranpoezdki
Kanjani ukuze uthole Bulgarian yisakhamuzi isakhamuzi Russia?
Umqondo netimphawu ubudlelwane komthetho we-civil
Sokuqonda SWAT. Kuyini SWAT futhi yini umsebenzi wawo?
Njengoba eqhwa Songa amaphepha? Senza eqhwa enhle ngezandla
Iyini isisindo 1 m3 ngokhonkolo
Umdlavuza Female. Incazelo ubunjalo, uthando ukuhambisana
Ukwahlukanisa izindleko zokukhiqiza
Amagilebhisi Amnandi Futhi okunempilo Rizamat
Indlela ukunqanda ikati, uma umbhejazane?
Ihhotela Sigma kuyona Jomtien, Thailand: incazelo kanye nokubuyekeza
Ibutho yesimanje Kazakhstan: inombolo bese ukwakhiwa kwezikhali
Yini ukondla ekhaya krasnouhih izimfudu ngokuvamile
Imithi homeopathic "Nervohel" - imibono ochwepheshe kanye neziguli
Indlela yokwenza izwe lakini isayithi usebenzisa Chalet Tricks?
Cradle - Iyini? Amafomu pack ibhamuza, ukusetshenziswa